माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङ आज ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदै
काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ आइतबार (आज) छेडिने (ब्रेक थ्रु) हुने भएको छ । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले आयोजनास्थलबाट शनिबार भन्नुभयो, आइतबार एक कार्यक्रमका साथ ब्रेक थ्रु गर्ने कामको तयारीमा जुटिरहेका छौँ । शनिबारसम्म सुरुङको सबै भाग खोलेर दुई मिटर मात्र बाँकी भाग छेड्न बाँकी राखिएको छ । आइतबार सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई राखेर दुई मिटर सुरुङ छेड्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको आयोजनाको सुरुङको कुल लम्बाइ १८.२ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये मुख्य सुरुङको लम्बाइ आठ किलोमिटर रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सो आठ किलोमिटरमध्ये आइतबार एक कार्यक्रमका साथ शुभारम्भ गर्नका लागि दुई मिटर मात्र खन्न बाँकी राखिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो, सुरुङलाई ब्रेक थ्रु गर्ने कुरामा हामी निर्धारित समयमा हाल सफल भएका छौँ । सुरुङको ब्रेक थ्रुले आयोजनाका कामलाई निकै अगाडि बढाएको अनुभव भएको छ । सडकको ट्रयाक खोलेको जस्तो सुरुङको पनि ट्रयाक खोलेको हौँ यसमा फिनिसिङ गर्ने कामका लागि धेरै मेहनत र समय लाग्छ ।
स्वदेशी लगानीबाट निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य करिब ९२ प्रतिशत सम्पन्न भएको दाबी आयोजनाले गरेको छ । यद्यपि मसिनो उपकरण जडान तथा गुणस्तरीय कार्यका लागि धेरै समय लाग्ने खालका काम जस्तै मुख्य सुरुङ मार्गको फिनिसिङ, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल काम बाँकी भएकाले आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन दिन अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् आयोजनाका लागि निकै समय लाग्ने र गुणस्तरीय काम अझै बाँकी रहेकाले अधिकांश ‘हेभी’ काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन लिन सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनासम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । पाँच वर्ष १० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनालाई गत दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले झण्डै अढाई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । सिभिल कार्यतर्फ हेडवक्र्सका मुख्य संरचनामा विशेष गरी डाइभर्सन बाँध, इन्टेक र बालुवा थिग्रयाउने पोखरीको सिभिल कार्य अन्तिम चरणका पुगेको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । पावरहाउसतर्फका मुख्य कामहरू पनि करिब करिब सम्पन्न भइसकेका छन् । छवटा युनिटमध्ये चारवटा युनिटमा लगातार काम भइरहेको छ, प्रवक्ता डा. न्यौपानेले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोजनाको ३० एमभीए क्षमताका ११ वटा सिङ्गल फेज पावर ट्रान्सफर्मरमध्ये आठवटा आयोजनास्थलसम्म ढुवानी गरी सकिएको छ । विद्युत् गृहको मुख्य उपकरणमध्ये जेनेरेटरका केही पार्टपुर्जा पनि आयोजनास्थलसम्म ढुवानी भइसकेका छन् ।